Soo dejisan Hard Disk Sentinel 5.70 Professional... – Vessoft
WindowsNidaamkaDisks adagHard Disk Sentinel
Bogga rasmiga ah: Hard Disk Sentinel
Hard Disk Sentinel – software si loo ogaado, loo kormeero loona falanqeeyo qalabka adag iyo SSD. Barnaamijka wuxuu awood u leeyahay inuu hubiyo xaaladda noocyadda kala duwan ee adag, iyadoo aan loo eegin nooca xidhiidhka oo ay ku jiraan DE, USB, ATA, SATA, iwm. Hard Disk Sentinel waxay taageertaa tiknoolajiyad gaar ah oo falanqeynaysa xaaladda maqalka, sifooyinka iyo saadaalinta waqtiga lagu qiyaasay ee fashil la’aanta. Barnaamijku wuxuu tijaabiyaa qalabka iyo qaybta qaybta qaybta software ee qalabka adag ee qaladka ama dhibaatooyinka kale. Hard Disk Sentinel wuxuu ogaadaa dhibaatada heerkulka, heerka sii xumaanta, meel bannaan oo lacag la’aan ah iyo bixinta xallinta dhibaatooyinka. Software-ka ayaa ka digtay isticmaalaha in la ogaado wixii isbedel ah ee shaqada ee disk ee ogeysiis dhawaaq ah, emails ama fulinta algorithm ee horay loo qorsheeyey. Hard Disk Sentinel waxay sidoo kale bixisaa kombiyuutarka haddii ay jirto cillad khafiif ah, maqnaasho ama xaaladda sii xumaanaysa.
Taageerida noocyada kala duwan ee diskka
Faahfaahin buuxda oo ku saabsan xaaladda maqalka
La socodka heerkulka maqalka
Faahfaahin faahfaahsan oo ku saabsan khaladaadka la helay
Wargelinta haddii dhibaato la ogaado
Soo dejisan Hard Disk Sentinel
Faallo ku saabsan Hard Disk Sentinel
Hard Disk Sentinel Xirfadaha la xiriira